PHOTOS. Laetitia Milot: sawirada ugu quruxda badan ee cunugeeda - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Sawirada. Laetitia Milot: sawirradeeda quruxda leh ilmaheeda
PHOTOS. Laetitia Milot: sawirradeeda quruxda leh ilmaheeda
Laeticia Milot u dabaaldegaa hooyonimada. Actress ayaa daabacay fariin dheer oo loogu dabaaldegayo sanadka 1 ee gabadhiisa, Lyana, oo ku dhashay 14 May 2018. Sababta oo ah xiddigta Nolol qurux badan ayaa muddo dheer ku riyooday inuu hooyo noqdo, laakiin wuu ku guuldareystay, sababtoo ah endometriosis. Maanta waxay la wadaagtaa a jacayl badan sawirada Lyana. Instagram, Laeticia Milot wadaagaan tallaabooyinka ugu horreeya ee uu yar yahay, oo ay ku jiraan safarkoodii ugu horeeyay ee Disneyland Paris iyo qoyskiisa, iyada oo ninkeeda Badri Menaia.
Talaado 14 ayaa laga yaabaa, Laeticia Milot ayaa u dabaaldegtay Maalinta dhalashada Lyana isagoo qaylinaya oo leh jacaylkiisa. "Ka dib dagaal muddo dheer ah waxaad calaamad u aragtay sankaaga 14 May 2018 ilaa 17h50. Horeba sanadki 1! Waxaad la yaabtay nolosheena, waadna ku mahadsantahay inaad ogtahay waxa farxadiisu tahay. Waxaad tahay rayigeena qorraxda, canugaaga jacaylka, mucjisada ilmahayaga, had iyo jeer waanu joognaa adiga aad adiga aad kuugu jecelnahay, naftaada mahadsanid. Lyana dhalatay. "
Dagaal ay ka sheegtay sheekada iyada oo noqoneysa hooyo: waxaan la dagaalameynaa endometriosis, oo ku baahinaysa TF1. Marka ay aragtay sawirada, Laeticia Milot ayaa si qoto dheer u dhaqaaqay. "Waxay i rabto si ay ula dagaalamaan dheeraad ah. Oo aad qiyaasi marka aad bilowdo halkii kuwa haweenka u silcin aamusnaan ah oo aan ka soo hijrooday guryahoodii, kaas oo lagu naafo kartaa sababta oo ah cudur this shitty (...) Waa adag tahay laba qof ee isqaba, kuwaas oo la dhaqaajin karin. "
Siidhin oo ay ku socoto Sandric Vasseur
Laetitia Milot iyada ninkeeda Badri iyo gabadhooda Lyana 14 May 2019
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.closermag.fr/people/photos-laetitia-milot-ses-photos-les-plus-mignonnes-avec-son-bebe-969369
Meghan Markle INSTAGRAM BATTLE, koontada Sussex ee soo wajahday Kate iyo William oo leh 8 malaayiin taageerayaal ah
Dad: Toddobaad ka dib dhalashada, Meghan Markle wuxuu ku celiyaa codadka xargaha maqaarka